Maxamed Cilmi Afrax oo sheegay inuu layaabay qaabkii uu xilka kaga qaaday Madaxweynaha Galmudug | Baydhabo Online
Maxamed Cilmi Afrax oo sheegay inuu layaabay qaabkii uu xilka kaga qaaday Madaxweynaha Galmudug
Wasiirkii Qorshaynta Maamulka Galmudug, Maxamed Cilmi Afrax, ayaa sheegay inuu layaabay sifaha uu xilka kaga qaaday Madaxweynaha Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed, maalintii Axada.
Wareegto uu soo saaray Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa xilka looga xayuubay Wasiirkii Qorshaynta Galmudug, ka dib markii Madaxweynuhu uu Wareegtada ku sheegay xil gudasho la’aan iyo amar diido uu sameeyay Wasiirku.
Wasiirka xilka laga qaaday, ayaa muujiyay in wax caadi ihi uu u arko in xilka laga qaado, balse uu layaabay wadada uu Madaxweynuhu xil ka qaadistiisii uu u maray.
“Xil la’iska qaadaahi wax dhab ah malaha, laakiin waxaa wax layaab leh ayadoo xiriirkeyga la haayo, lana haayo meelihii fariimaha la’igu soo diri jiray (Emailkeyga la haayo), oo Wasaaraddii aan joogay Email ay leedahay, in wixii aan suuqa ka maqlo oo Websiteyada la soo dhigo. Arrintaasi maaha arrin ku saleysan Maamul wanaag.” Ayuu yiri Wasiirkii Qorshaynta Galmudug.
Wadada loo maray xil ka qaadistiisii, ayuu ku sheegay mid ka turjumaysa sida ay u liidato xeerarka shaqada, ee Maamulka uu Madaxweynuhu ka yahay C/kariin Xuseen Guuleed
Waxay muujinaysaa arrintaasi arrin aad u liidata oo xeerarka shaqadana ka horimaanaysa. Marka midaasaa layaabay, yacni warqadaha Websiteyada la geliyay, laakiin aniga in xil la’iga qaado lama yaabi karo.” Ayuu yiri isagoo wareysi siinaayay Radio Mustaqbal.
Maxamed Cilmi Afrax, ayaa arrin kaloo layaab ku beertay ku sheegay sida deg degga ah ee xilka looga qaaday, xilli Baarlamaanka Galmudug uu ka sugaayay inuu kaga warbixiyo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxa aan u qabsoominba Wasaaradiisii.
“Waxaan kaloo runtii ayadana yaab igu noqotay, iyadoo aan xog badan haayay, warbixin badana haayay Baarlamaanka Galmudug-na uu ii heelanaa, ina sugaayay, isla-markaana aan rabay warbixinta inaan dhiibo wixii qabsoomay, wixii qabsoomi waayay, wixii ay u qabsoomi waayeen, caqabadaha jira iyo fursadaha jiraba, oo 10 bilood soo shaqaynaayay, xog badana aan haayay, in la sugi waayay xitaa, haddii wax la qaadaayo xogtaa la dhageysto ay ahayd. Marka xooggaa waxaan layaabay sida wax looga deg degay, deg deggaa layaabay.” Ayuu yiri Maxamed Cilmi Afrax.
Afrax, ayaa ku celiyay ka shakhsi ahaan inaysan wax saamayn ihi ku yeelanayn xil ka qaadistiisii, hase yeeshee ay dhici karto inay saamayn ku yeelato dadka reer Galmudug, oo u arkaayay inuu yahay shakhsi meel uga aadanaa.
“Wax kaloo aniga saamayn ah ay igu sameysay malaha, balse waa laga yaabaa dadka Galmudug oo kale inay saamayn ku reebto, oo runtii qaarkood ay ka xumaadaan, iyagoo u arkay meel wayn inaan uga aadanaa, meeshiina ay bannaanaatay.” Sidaasi waxaa yiri Afrax oo ku soo laabtay Magaalada Muqdisho.